Spotify iri kushandisa kutenderera kwakananga kubva kuApple Watch | Ndinobva mac
Spotify iri kushandisa kutenderera kwakananga kubva kuApple Watch
Spotify urikuyedza hukuru hukuru kune yako watchOS application. Iwe unozogona kuteerera kune zvese zvirimo papuratifomu zvakananga paApple Watch yako, usingatombofaniri kuvimba ne iPhone yako. Izvi zvichaitika kana iwe uine wachi yakabatana newifi yako, kana iwe uine iyo LTE vhezheni.
Saka kana iwe ukaenda kunotamba mitambo neako Apple Tarisa LTE Pasina nharembozha, unogona kutaurira Siri kuti atambe zvaunoda kubva kuSpotify, pasina dambudziko. Ehezve, tarisa chiyero chedata chaunobata muEIM yewachi yako ...
MunaGunyana, Spotify akatanga kuyedza kugona kurodha zvirimo kubva kumaseva ayo kuenda kuApple Watch. zvakananga. Yakatanga neboka rakaganhurirwa revanoedza, vasingazive kana bvunzo iyi yaizobudirira uye kana yaizoitwa kune vamwe vashandisi. Zvinotaridza kuti bvunzo dzakabudirira, uye dzinozoitwa mune ramangwana kugadzirisa munguva pfupi.
Vanoverengeka vashandisi veSpotify vanga vasiri chikamu chekuyedza kwekutanga varikumhan'arira kune masocial network kuti vanogona kuteerera Spotify zvemukati zvakananga paApple Watch yavo vasina kubatanidzwa MAKARALI USB kune yayo inoenderana iPhone.
Kana ficha iyi yaitwa zvizere, unogona kugamuchira yako Spotify zvemukati zvakananga kubva kuApple Watch. Iwe haufanire kuvimba neiyo iPhone kubatana kuti uteerere kumimhanzi kana podcast. Icho chinhu chakafanana icho chakamisikidzwa nevamwe vechitatu-bato mumwedzi ichangopfuura, senge Pandora.
Ichi chiitiko chitsva chichaitwa zvishoma nezvishoma kune vese vashandisi, saka zvinogona kutora mazuva mashoma kusvikira iwe uchizviona zviripo pawachi yako. Iyo chete yekudzikira ndeyekuti kana iwe uchida kusarudza theme kubva kuApple Watch, unofanira kubvunza Sirisezvo pasina sarudzo yekutsvaga nziyo kubva kuWatchOS Spotify.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Spotify iri kushandisa kutenderera kwakananga kubva kuApple Watch
Ndanga ndichiri kuyedza kubva munaGunyana uye zvekutaura ... zvinokundikana kupfuura pfuti yepasirese ... ehe ... ichiri mubeta asi poof ... mazuva ese kujimu ndinofanira kudhonza apollo (nerombo rakanaka Ini ndinoburitsa pasi pamberi pekuti ivo vachabvisa kubva kuApple chitoro) chinoshanda zvirinani zvirinani .. uye icho chave chiuru pasina rutsigiro .. nekuti kana nechikonzero chipi zvacho iyo wifi ikakundikana (munyika yangu mamimemu akawanda haaenderane) unogona kuteerera kune yakadzingwa pasina dambudziko ..
Kusvikira Spotify yarega nziyo dzichi dhawunirodha kuawa, hazvizoshande.
(Pamusoro peizvozvo izvozvi, kubvira kwekupedzisira kugadzirisa ... panosvika chiziviso chewhatsapp, ap inomira kushanda ..)
Podcast 12 × 07: Zvatinotarisira kubva kunotevera Mac Chiitiko
Iwo anoshamisa akawedzera chokwadi pane webhusaiti yechiitiko chaNovember